Ukurhoxisa ngoxa usahleli - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Ukubuyiselwa kwemali – isihloko soncedo
Into engekho ngendlela ebilindeleke ngayo ngoxa ubuhleli? Inyathelo lakho lokuqala kukuthumelela umyalezo Umbuki Zindwendwe wakho ukuze ayilungise. Ukuba akakwazi ukuyilungisa, unokukubuyisela inxalenye yemali yakho.
Ukuba Umbuki Zindwendwe wakho uyakurhoxisa ukubhukisha kwakho, uza kusoloko uyibuyiselwa yonke imali yakho, ubuyiselwe neemali ezimele zibhatalwe kunye neerhafu. Ungathumela okanye ufumane imali Kwiziko Lezemali.
Ufuna ukuncedwa ngakumbi?
Ukuba Umbuki Zindwendwe wakho akakwazi ukukunceda, unokufanelekela ukubuyiselwa yonke imali yakho phantsi Kwepolisi Engokubuyiselwa Kwemali Yondwendwe ukuba uqhakamshelana noAirbnb zingekapheli iiyure eziyi-24 uyibonile ingxaki. Funda ukuba ingxaki yakho iqukiwe na.
Into omele uyenze ukuba indawo oza kuhlala kuyo ayicocekanga xa ufika
Ukuba xa ufika, ufika indawo ingacocekanga, qhakamshelana noMbuki Zindwendwe wakho uze emva koko uqhakamshelane noAirbnb. Kubalulekile ukuba…
Ukuba Umbuki Zindwendwe wakho urhoxisa ukubhukisha kwakho
Ukuba ukubhukisha kwakho kuyarhoxiswa nguMbuki Zindwendwe, siza kukubuyisela yonke imali ngokuzenzekelayo.
Fumana iinkcukacha ngendlela ekurhoxiswa ngayo xa kuvela iimeko ezingalindelekanga ezingapha kwamandla akho emva kokubhukisha ezenza ungakwa…